Prospect (ဖောက်သည်လောင်းတွေ) ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲ? - Sales Training Programs by Charisma
Prospect (ဖောက်သည်လောင်းတွေ) ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲ?
အရောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် နာမည်ကြီးတဲ့ ဆိုရိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်။
“Sell the problem you solve, not the product” တဲ့…။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဈေးရောင်းခြင်း အတက်ပညာမှာ ကျွန်တော်တို့ အရောင်းသမားတွေဟာ မိမိရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုကို ဖောက်သည်တွေဆီ လို/မလို မဆုံးဖြတ်မစဉ်းစား ထိုးရောင်းခြင်းထက် မိမိရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက ဖောက်သည်တွေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိစေပြီး သူတို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ နေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းဖို့ အဓိက ကြိုးစားလာကြပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက တာဝန်က ဖောက်သည်လောင်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရှာ။ ဒါပေမယ့် မေးစရာရှိလာတာက မိမိ ဖောက်သည်လောင်းတွေရဲ့ အခက်အခဲကို ဘယ်လိုရှာကြမလဲဆိုတာပဲ?ဒီနေရာမှာ နည်းလမ်းတွေ တော်တော်များများရှိပေမယ့် အမှန်ကန်ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်း ၄ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်…။
ထပ်လာပြန်ပြီလားလို့ မတွေးပါနဲ့။ “နားထောင်ပါ” ဆိုတဲ့ စကားကို အရောင်းသမားတွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ သံမှိုစွဲနေအောင် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောနေရမှာပါပဲ။
နားထောင်ပါဆိုတဲ့ သဘောက active listener တစ်ယောက်အနေနဲ့ နားထောင်ပါလို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ နားထောင်လေဆိုလို့ နားထောင်တယ်လေဆိုပြီး ဖောက်သည်ပြောသမျှ အရေးကြီးတဲ့ မှတ်စရာတွေကို လိုက်မမှတ်ချပဲ မျက်နှာသေနဲ့ နားထောင်ပြီး ကိုယ် နောက်ပြောမယ့်စကားတွေကို စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှမထူးပါဘူး။ ဖောက်သည်လောင်းလျာတိုင်းလိုလိုက သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲနှင့် ဒုက္ခတွေကို ပြောဆိုချင်စိတ်ရှိကြပြီး ဒါတွေဖြေရှင်းဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း ပြတက်ကြတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရောင်းသမားတိုင်းဟာ မတူညီတဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အသီးသီးကို ရောင်းနေကြတာဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် မေးခွန်းကောင်းတွေ မေးပါလို့ပဲပြောနိုင်ပြီး အမှန်ကန်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ မရှိပါဘူး။ မေးခွန်းကောင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ “ကြိုက်လား” “ကြိုက်တယ်” “ကောင်းလား” “ကောင်းတယ်” ဆိုတာထက် “ဘာလို့ကောင်းတာလဲ?” “ဘာလို့ကြိုက်တာလဲ” စတဲ့ အဖွင့်မေးခွန်းတွေကို မေးနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ သူ့ ပြဿနာနဲ့ သူပါ။ ထို့အတူပဲ ဖောက်သည်လောင်းတွေမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေက လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရရော၊ မတူညီတဲ့ နောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်စတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကြောင်း ထပ်တူမကျနိုင်ပါဘူး။ ဒါကိုမှ သေချာမစူးစမ်းမလေ့လာ အမှန်ကို မစူးစမ်းပဲ မျက်စိမှိတကောက်ချက်ချလိုက်ခြင်းဟာ အရောင်းသမားတစ်ယောက်အဖို့ အမှားကြီးကြီး လုပ်လိုက်တာပဲ။ အရောင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်က ဖောက်သည်လောင်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို နားထောင်ပြီး သိအောင်လုပ်ဖို့ပါ၊ အထင်နဲ့ ကောက်ချက်ချလို့မရပါဘူး။
အရောင်းသမားဟာ ကျောင်းသားမှ မဟုတ်တာ၊ research လုပ်ဖို့လိုလို့လားမေးရင်တော့ (လုံးဝ)လိုပါတယ်လို့ပဲ ဖြေပါရစေ။ အထူးသဖြင့် B2B အရောင်းသမားတွေအတွက်ဆို ပိုလို့တောင်လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိနဲ့တွေ့မယ့် ကုမ္ပဏီနဲ့ တွေ့မယ့်သူရဲ့အကြောင်းကို ကြိုတင်လေ့လာဖတ်ရှုပြီး လိုအပ်သလို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဖောက်သည်လောင်းတွေရဲ့ အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခတွေဟာ အရောင်းသမားတစ်ယောက်အတွက် အရောင်းပိတ်သိမ်းနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းပြ မြေပုံပါ။ ကိုယ်ဟာ သူတို့အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ရင် အရောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ခြေတစ်လှမ်းနီးစပ်လာတဲ့သဘောပါပဲ။